Cnaps-Dinec: fiofanana fiahiana sosialy tany Antsiranana | NewsMada
Nanome fiofanana ho an’ny Vondron’ny ray aman-drenin’ny mpianatra (Vram) ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) tany amin’ny diosezin’Antsiranana. Nitarika ny fotoana Rtoa Riziky Abdou, nisolo tena ny tale jeneraly vonjimaika ny Cnaps, Rtoa Tsaboto Joslina. Noresahina ny hanamorana ny hahazoana fiahiana sosialy, ny handresen’ny mpiofana lahatra ny manodidina azy, ny lanjan’ny tombontsoa omen’ny Cnaps. Nampahafantarina ny tolotry omena ny mpikambana, toy ny fiahiana ny fianakaviana, ny solon-takaitra raha sendra tra-doza na ny aretina vokatry ny asa, ny fisotroan-dronono, sns.
Nanomboka ny taona 2016 ny fiaraha-miasan’ny Cnaps sy ny Foibe nasionalin’ny sekoly katolika Didec, nahatanterahana ny fiofanana amin’ny fiahiana sosialy, toy izao. Nilaza ny tompon’andraikitry ny fiofanana sady mpandrindra ny asa an-tsekoly (Didec), Rabenandrasana Alfred, fa “tanjona ny fahalalana ny lalàna sy ny mpahafantatra izany amin’ny hafa”.
Niofana koa ny ray aman-dreny
Ho an’ny talen-tsekoly, ny mpampianatra, ny mpitantana eny amin’ny sekoly katolika ny tapany voalohan’ny fiofanana. Nomena fiofanana koa ny ray aman-drenin’ny mpianatra any amin’ny diosezy, ho an’ny tapany faharoa. Vonona ny handresy lahatra ny namany hiditra Cnaps i Mananstoa Monios Flidos, ray aman-drenin’ny mpianatra ao amin’ny sekoly Fo Masin’i Jesoa Antsiranana.
Nanamarika ny mompera Thierry Landry, mpanampy ao amin’ny fitantanana ny Dinec Antsiranana, fa efa mpikambana Cnaps avokoa ny mpampianatra ao amin’ny diosezy afa-tsy ny any ambanivohitra, izay miisa vitsivitsy sisa, satria misolo mpampianatra matetika.